गुर्जो वितरण अभियान तीव्र: ९० हजार बिरुवा निःशुल्क वितरण:: Naya Nepal
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलँदै जाँदा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने गुर्जो वितरण पनि बढ्न थालेको छ ।
गुर्जोको बिरुवा, धुलो, डाँठ र चिया निःशुल्क वितरणमा लाग्नुभएका अभियानकर्मी कमलबहादुर राजलवटले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा माग अनुसार वितरण गरिएको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी त्रिभुवन विश्वाविद्यालयको राजनीति शास्त्र, भूगोल लगायत चार विभागमा करिब ४०० बिरुवा वितरण गरिएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.१ इमाडोलमा पनि ३०० बिरुवा हस्तान्तरण गरिएको अध्यक्ष राजलवटले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित निर्माणधीन राष्ट्रिय शहीद स्मारकस्थलमा ५०० बिरुवा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यी बिरुवा शनिबार रोपिनेछ । अभियानकर्मी राजलवटले लहानको सरकारी निवास रहेको करिब १० कठ्ठा जमिनमा जडिबुटी रोप्नुभएको छ ।
भान्सामा भएका सामाग्री उपयोग गर्न जान्दा अस्पताल धाउनु पर्दैन !
काठमाडौं । हरेक नेपालीको भान्सामा हुन्छ, बेसार, अदुवा, लुसन, जिरा, ज्वानो, मेथी, तेजपत्ता, ल्वाङ, सुकुमेल ।
धेरैजसोको बगैंचामा हुन्छ, घिउकुमारी, तुलसी, पुदिना । वास्तवमा यी सबैकुरा औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छन् ।
त्यसैले सामान्य ज्वरो, रुघाखोकीदेखि पेट दुखेको, जोर्नी दुखेको, घाउ खटिरा आएको, अपचभएको सबै अवस्थामा यसैलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आफ्नो भान्सामा उपलब्ध सामग्रीको प्रयोग गर्न जानियो भने सानोतिनो स्वास्थ्य समस्याका लागि एलोपेथिक औषधि सेवन गर्नु पर्दैन, अस्पताल धाउनु पर्दैन ।
धेरै नेपालीलाई हुने समस्या हो, ग्याष्ट्रिक । ग्याष्ट्रिक भएमा अदुवाको सेवन उपयोगी हुन्छ । अदुवामा एन्टी इन्फलेमेटरी गुण हुन्छ, जसको कारण यसले शरीरमा पाचक रस उत्पादन बढाउँछ ।
पाचक रस बढेपछि खानेकुरा पचाउन सजिलो हुन्छ । साथै शरीर भित्रको ग्यास पनि बाहिर निस्कन्छ । अदुवालाई स–सना टुक्रा बनाएर वा पानीमा उमालेर खान सकिन्छ ।
पेटको समस्या वा ग्याष्ट्रिकमा ज्वानो पनि निकै उपयोगी हुन्छ । ज्वानोको दानालाई चपाएर वा पानीमा उमालेर सेवन गर्न सकिन्छ ।
पुदिना पेटको लागि धेरै गुणकारी वनस्पति हो । त्यसो त पुदिनाको अचार पनि स्वादिलो हुन्छ । पुदिनालाई अचारकै रुपमा वा त्यसै पनि सेवन गर्न सकिन्छ ।
गिलास गाइको दुधमा आधा कागती निचोरेर तुरुन्त सेवन गर्दा रगत तथा पिपआउने जस्ता समस्या ठीक हुन्छ ।
कसैलाई फिटकिरी एक टुक्रा राखेर दश लिटर जति पानीमा दिनको दशमिनेट बस्दा धेरै आराम मिल्छ ।
नरिवलको बाहिरको जटा डढाएर एक चिम्टी खरानी र दुबोको २ चम्चा रस घोलेर बिहान बेलुका एक गिलास मनतातो पानीसंग खाँदा ठीक हुनसक्छ ।
यसका लागि उपयोगी हुन्छ, लसुन । लसुनमा इन्जाइमको मात्रा हुन्छ जसले मिगमेन्ट उत्पादन गर्ने स्रोतहरुलाई नै हटाइदिने काम गर्छ । लसुनको केस्रालाई पिसेर कोठीमाथी लसुनको लेप लगाउनुपर्छ । त्यसपछि यसलाई सफा कपडा तथा प्लास्टरले ढाक्ने ।नारी मासिकबाट